Akụkọ - Ụzọ maka iwepụ nchara
1.Small pneumatic ma ọ bụ eletriki derusting. A na-akwado ya nke ọma site na ọkụ eletrik ma ọ bụ ikuku abịakọrọ ma kwado ya na ngwaọrụ derusting kwesịrị ekwesị maka ịmegharị mmegharị ma ọ bụ mmegharị rotary iji gboo mkpa mkparị nke oge dị iche iche. Dị ka ihe atụ, angle grinder, ígwè waya ahịhịa, pneumatic agịga doo derusting ngwaọrụ, pneumatic derusting hama, nha nha ụdị rotary derusting ngwaọrụ, wdg bụ nke ọkara mechanized akụrụngwa. Ngwá ọrụ ndị dị mfe na mgbanwe. Ha nwere ike wepu nchara na mkpuchi ochie kpamkpam. Ha nwere ike mebie mkpuchi ahụ. The arụmọrụ na-ukwuu mma tụnyere ntuziaka derusting, ruo 1 ~ 2M2 / h, ma ha enweghị ike wepụ oxide ọnụ ọgụgụ, na elu roughness bụ obere, Ọ pụghị nweta elu-edu elu ọgwụgwọ àgwà, na ọrụ arụmọrụ bụ ala. karịa ọgwụgwọ mgbawa. Enwere ike iji ya mee ihe n'akụkụ ọ bụla, karịsịa na usoro nrụzi ụgbọ mmiri.
2, Shot gbawara (aja) derusting. Ọ bụ tumadi esịnede urughuru ugboelu ozize iji nweta elu ịdị ọcha na kwesịrị ekwesị roughness. Akụrụngwa gụnyere emegheigwe gbawara agbawa (aja) derusting igwe, agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba mechiri emechi mechiri emechi, ájá ájá. Mepeeigwe gbawara agbawa (aja agba agba). a na-ejikarị eme ihe, nke nwere ike wepụ kpamkpam adịghị ọcha niile dị n'elu igwe, dị ka ọnụ ọgụgụ oxide, nchara na ihe nkiri agba ochie. Ọ nwere elu nchara mwepụ arụmọrụ nke 4 ~ 5m2 / h, elu n'ibu ogo na ezi nchara mwepụ àgwà. Otú ọ dị, abrasive enweghị ike ịmegharị ya n'ozuzu ya, nke nwere mmetụta na ọrụ ndị ọzọ, n'ihi ya, ọ na-esiri ike ihicha saịtị ahụ. Ya mere, mmetọ gburugburu ebe obibi dị njọ, ma ejirila nwayọọ nwayọọ gbochie ojiji ya n'oge na-adịbeghị anya.
3, High nsogbu mmiri abrasive derusting. A na-eji mmetụta nke jet mmiri dị elu (gbakwunyere mmetụta na-egweri nke abrasive) na mmiri prying na-ebibi corrosion na adhesion nke mkpuchi na efere ígwè. A na-eji ya enweghị mmetọ uzuzu, enweghị mmebi nke efere ígwè, na-eme ka arụmọrụ derusting dịkwuo mma, ruo ihe karịrị 15m2 / h, na àgwà derusting dị mma. Otú ọ dị, efere ígwè mgbe derusting dị mfe nchara ọzọ, n'ihi ya, a ga-ekpuchi ya na mkpuchi mmiri mmiri pụrụ iche, nke nwere mmetụta dị ukwuu na mkpuchi nke mkpuchi ọrụ izugbe.
4,Mgbawa agbawa. Mgbawa agbawa agbawa bụ iji igwe na-agbagharị ọsọ dị elu iji tụba ihe abrasive n'elu igwe iji nweta ebumnuche nke iwepụ nchara. Ọ bụ usoro ọgwụgwọ igwe dị elu karịa maka iwepụ nchara nke ihe nchara anụ ahụ. Ọ bụghị naanị na ọ nwere nnukwu mmepụta mmepụta ihe, kamakwa ọ nwere ọnụ ala dị ala na nnukwu akpaaka. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ ahịrị mgbakọ na obere mmetọ gburugburu ebe obibi, mana enwere ike iji ya naanị n'ime ụlọ.
5.Dilute hydrochloric acid. Kpachara anya ka ị ghara itinye nchara n'ime ya ogologo oge. Ma ọ bụghị ya, a ga-emeghachi ihe ahụ na mgbakwunye na nchara elu
Mwepu kemịkalụ bụ ụzọ nbibi nke na-eji mmeghachi omume kemịkal dị n'etiti acid na metal oxide wepụ ihe nchara nchara n'elu igwe, ya bụ, ihe a na-akpọ pickling derusting nwere ike rụọ ọrụ naanị n'ụlọ ọrụ.
Anyị Zibo TAA bụ onye na-eweta ọrụ zuru oke maka ọgwụgwọ elu. gụnyere na-agbawa abrasives mgbasa ozi ọkọnọ,igwe gbawara agbawa na ngwa,diamond egweri na ịcha ngwaọrụ wdg.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla chọrọ maka abrasives na-agbawa agbawa ma ọ bụ igwe na-agba ọkụ na ngwa na-anabata gị ịkpọtụrụ anyị!